Lupercales, na nmalite nke Saint-Valendin - AFRIKHEPRI
Chabin, mulatto: tozuru oke nwere mkpuru okwu di iche-iche
Les Lupercales bụ ememme a na-eme kwa afọ site na February 13 ruo 15 nke ndị luperques, ndị ụkọchukwu Rome oge ochie na ngwụsị afọ na kalenda ndị Rom. A na-achịkọta luperques na kọleji nke na-achịkọta ụmụ ụmụ ndị okenye ezinụlọ ndị tọrọ ntọala obodo Rome.
Nke a na usoro nke ememe na-eme ememe ncheta nke ara Romulus na Remus site a wolf na-akwụ ụgwọ ụtụ Faunus Lupercus, a chi nke ọmụmụ na agbachitere ìgwè ehi megide anụ ọhịa wolf na-enwe a ọkara-nwoke ọkara ewu anya. The 12 Luperci nchu àjà a ewu na chi ha na ọgba nke Lupercal ụkwụ nke Palatine Hill ebe ọ-wolf na-enye nwa Romulus na Remus ga nwere tupu ha na-anakọtara site na a na-azụ atụrụ na nwunye onye nwaanyị, a akwụna, a na-akpọ "Lupa" (wolf na Latin). Nke a "Lupa" a na-akpọ Acca Laurentia na ahia ịgba akwụna mere ya na-agaziri na nyere ya uba ọnwụ ya na Romulus.
Tupu Rom adị, ndị Gris na-eme ememme wolf, "Lukéia", bụ nke Lupercalia ga-asọpụta. A na-egosipụtakwa Pan onye Grik Pan na ọkara ewu ewu ọkara. Ọ bụ onye nchebe nke ndị ọzụzụ atụrụ na ìgwè ewu na atụrụ. Pan ga - abụ otu n'ime aha Chineke ole na ole nwere ike ịkọwa oge oge Indo-European. Chi Pan bu onye a ma ama maka inwe ike inwe mmekorita ya ma ekwu na ya mutara onwe ya n'aka nna nna ya Hamis wee nye ndi ogha a. Pan na-ejikọta àgwà ndị a na-ejikọta ọnụ na ndị a nwere ọnọdụ dị nro na nke ntorobịa dịka nke mmekpa ahụ nke nwata.
Onye ụkọchukwu oku na-eme ememme ahụ mgbe ọ na-egbutu isi ala nke ụmụ okorobịa abụọ ka ọbara wee wụfụ weere ya na mmiri ara ehi. Mgbe ahụ a na-eto ndị mmadụ ọsọ fọrọ nke nta gba ọtọ na obodo ahụ dum nke Rome ọjọọ ndị inyom na-agafe, na chọrọ ka a na nwa na goatskin ọla kpaa eriri ka ha na-emepụta nri. A na-ewere ewu ahụ dịka anụmanụ nke na-anọchite anya agụụ na-agụsi agụụ ike, ihe niile agụụ mmekọahụ.
N'oge Lupercalia ndị a, ụmụ nwoke na-ahọrọ aha ndị inyom na-eto eto na usoro ihe omume bụ nanị mmekọahụ rụrụ arụ. Na nkenke, ọ bụ oge ezughị oke mmekọahụ.
Otú ọ dị, mgbe ndị na European 494 AD Pope Gelasius m (sitere North Africa, hụ ọrụ Runoko Rashidi) biri ọzọ na nnọchianya site Valentine, nchebe senti nke kwere nkwa ọlụlụ di na nwunye na ndị hụrụ, na iwu ka 14 February bụ ụbọchị a raara nye nnọkọ a na ihu ọhụrụ. The aha nke Ɛpo na-ejide Valentine nke Terni, a mọnk 3e narị afọ n'ihi okwukwe n'okpuru Eze Ukwu Rom bụ Klọdiọs II (Claudius Marcus Aurelius Gothicus), utu aha "Claudius nke nwere obi ọjọọ." Valentin de Terni, site n'usoro nke Claude the Cruel, ndị agha ndị agha kụrụ ma gbuo isi 14 February 269.
Ihe nnọchianya nke ewu
Anyị hụrụ na ewu ejikọtara na ememe ọmụmụ. Ozokwa, Lupercalia bu ememe nke idi ocha, o bu onyinye nke ewu nke na-eme ka omenala ndi Europe buru ihe a na-akpo "scapegoat" iji kpochapu ihe ojoo. Na omenala nke Judeo-Christian, ewu ahụ aghọwo ihe nnọchianya nke emegide Kraịst ma jiri ya tụnyere Setan ka ọ na-egosikwa agụụ. N'ebe anwansi Europe, anyị na-ahụ àgwà nke Baphomet bụ onye na-anọchite anya ọkara ọkara nke ọkara. Ihe oyiyi a na-ahụ anya nke Baphomet a bụ Eliphas Levi, onye ụkọchukwu French nke narị afọ nke iri na itoolu na nnukwu mgbaasị.
Na mgbakwunye na inye ụmụ ewu àgwà nke ọmụmụ, a na-ekwu na ha ga-eziga ikike a maka ụmụ nwoke na nke a na-akọwa omume nwoke na nwanyi. N'ezie, anyị ghọtara nke ọma mgbe ndị Gris nọ n'Ijipt oge ochie na-ede akwụkwọ a nke Herodotus mgbe ọ na-ekwu, sị: "O mere, mgbe m nọ n'Ijipt, ihe dị ịtụnanya na Mendesian nome: ewu nwere n'ihu ọha ahia a na nwanyi, ma onye a mara onye njem a. (N'akwụkwọ ya "Inquiry"). Mendès dị na mpaghara Naịl Delta.
Na ukwuu ohu na colonial akwụkwọ, African ime mmụọ e denigrated ọ bụla n'akuku n'ókè nke na ọtụtụ ndị Afrịka atụgharị ha Akwadoo maka ịta amoosu, fetishism, na ikpere arụsị, ma ọ bụ ndị ọzọ ruru unyi okwu nke genre . Gini ka mmadu nwere ike ikwu maka ndi amoosu nke Ubochi Ɛpo a n'ofufe zuru oke nke ndi Kristain na nke mejuputara omenala Indo-European nke agba ewu a? N'okpuru mkpuchi nke ịchọta nzọpụta nke mkpụrụ obi anyị, ọtụtụ ndị na-emikpu n'ime omenala Euras nke ha na-eleghara anya kpam kpam.
N'ihe niile, ememme Lupercalia, nke ghọrọ ụbọchị Valentine, bụ n'ememe n'ememme a ma ọ bụ na-eme ememe ebe oke igwe na-abụ egwuregwu kachasị mma n'oge ahụ. Enweghị ihe ọzọ.
Site na Nzwamba Simanga
16,50€ dị na ngwaahịa
2 ọhụrụ site na 16,50 €
Ejiri 1 € 32,76 mee ihe
dị ka Mee 24, 2020 8:02
Ụbọchị mwepụta 2015-09-11T00:00:01Z
Publication Ụbọchị 2015-09-11T00:00:01Z
Lelee na Gondwana (2016)